Barashada Isticmaalka Bogagga Masterka ee InDesign | Abuurista khadka tooska ah
Lua louro | | Qalabka Naqshadeynta, Tababarada
Waxaa jira dhowr walxaha lagu celiyo inta lagu jiro boostada, haba yaraadee. Tusaalaha tani wuxuu noqon karaa, tusaale ahaan, lambarrada bogga. Sawirada ku yaal meel aad u cayiman xaashi kasta, oo si isku mid ah loogu celceliyo daabacaadda oo dhan. Qalfoofka hagaya halabuurka qoraalka ayaa sidoo kale lagu celceliyey, oo ah tabeel ahaan.
Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu waaweyn ee isticmaalka InDesign qaabeynta qoraalka, ayaa ah maareynta noocyada noocan ah ee soo noqnoqda. Mahadsanid isticmaalka saxda ah ee bogagga sayidka, nafteenna waan badbaadin doonnaa hawsha inaad nuqul ka sameysato oo aad ku dhajiso boggaga: waxaan otomaatig u abuuri doonaa abuurista wax kasta oo soo noqnoqonaya. Taasi waa waxa aad ku baran doonto inaad sameyso adoo aqrinaya casharradan aasaasiga ah ee ku saabsan isticmaalka bogagga sayidka ee InDesign.
1 Bogagga Master ee InDesign
1.1 Lambarrada bogga
1.3 Sidee boggaga sayidku u shaqeeyaan
1.3.1 Sideen se isugu dari karnaa?
1.3.2 Sideen ugu codsan karnaa bogga ugu sarreeya faafin dhan?
1.3.3 Oo sidee baan ugu dabaqi karnaa bogga sayidkiisa faafinta / bogagga badan?
1.3.4 Sideen uga saareynaa bogga sare ee horey loogu adeegsaday bog?
Bogagga Master ee InDesign
Waxaan marin u helnaa Gudiga boggaga (Daaqad> Bogag).
Waxaan laba jeer gujineynaa astaamaha bogga Masterka Bogga A-Master. Sidan oo kale, waxaan hadda wax ka beddeli karnaa bogga sayidkiisa ee aan ku haysanno asal ahaan madhan.
Aynu galno lambarrada bogga. Si tan loo sameeyo, waxaan abuurnay a sanduuqa qoraalka labada go ’midkoodna. Gudaha sanduuqa, waxaan si sax ah u gujineynaa oo aan aadi doonnaa Gali dabeecad gaar ah> Calaamado> Lambarka bogga ee hadda.
Sanduuqayaga qoraalka waxaan ku arki doonaa xaraf A. Waraaqdani, markay riixintu timaaddo, waxay noqoneysaa tirada u dhiganta warqad kasta.
Waxaa jira shay aad muhiim u ah oo ay tahay inaanan ilaawin: wax walba wali diyaar ma ahan. Waan awoodnaa (waana inaan) wax ka beddel muuqaalka lambarka boggayaga. Sida hadday ahaan lahayd qoraal kale, waxaan dooran karnaa fartiisa, xajmigeeda, midabkeeda ... Iyo dabcan, meesheeda. Mar alla markii aan hagaajinno cabbiraaddan aan rabno, waxaan arki karnaa sida ay lambarrada boggu u yihiin.
Si tan loo sameeyo, waxaan laba-gujineynaa bogagga dhabta ah ee dukumiintigayaga.
Shabakaddu waa qaab-dhismeedka hubin doona isku-dheelitirka iyo iswaafajinta qaabkeenna. Si aad uga dhex abuurto 'InDesign', kaliya tag Layout> Abuur hagayaal menu.
Waxaa furi doona khaanad yar oo wada hadal ah oo na weydiin doonta tirada laynka la doonayo iyo tiirarka shabakadeena mustaqbalka. Intaa waxaa dheer, waxay ku dhex jirtaa fikradda majaroorka, taas oo aan ka badnayn inta u dhexeysa sadar kasta (ama sadar). Waxaan soo galnaa qiyamka aan dooneyno oo InDesign, xisaab ahaan, waxay xisaabineysaa cabirka qaybaha si ay dhammaantood u wada yeeshaan saamiga isku midka ah.
Sidee boggaga sayidku u shaqeeyaan
Sidaad u aragto, waxaan leenahay laba bog oo mareeg ah: A-Master Page iyo B-Grid.
Warqad ayaa la qori karaa oo keliya hal bog oo mastar ah. Tani maxay uga dhigan tahay, tusaalaheena? In go'yaasha leh bogga sayidka A loo qoondeeyey (oo leh lambarrada bogga), ma awoodi doonaan inay adeegsadaan shabakadda bogga sayidkiisa B. Haddii aan hubno in, dhammaan xaashiyaha ay leeyihiin lambarrada bogga, waxaan sidoo kale dooneynaa si loo helo shabakadda, waxaa ugu wanaagsan inaan u adeegsanno hal bog oo keliya labadaas arrimood.
Sideen se isugu dari karnaa?
Aynu aadno heerkii hore: nuqul-dhaji. Waxaan doorannaa, tusaale ahaan, shabakadda bogga sare ee B; nuqul ka sameyso, tag boga master A oo dhaji. Marka xigta, waxaan tirtirnaa bogga Master-ka ee hadhay madhan (B), maadaama aanan adeegsan doonin.
Sideen ugu codsan karnaa bogga ugu sarreeya faafin dhan?
Guji astaanta Bogga A-Master: ha siideyn ilaa aad la joogto tilmaamahaaga qarkiisa xaashida. Waqtigaas, bogagga xaashidu waxay noqon doonaan cawl midab leh, maadaama aad xulatay: hadda waa inaad sii deysaa. Xariif ah!
Oo sidee baan ugu dabaqi karnaa bogga sayidkiisa faafinta / bogagga badan?
Ugu horreyntii, iyaga ayaynu dooran doonnaa: waxaan gujineynaa calaamadda oo waxaan ku sii wadaynaa tan, annaga oo keydinayna furaha Shift. Hadda, waxaan qaadaneynaa bogga sayidkiisa oo aan ku ridi karnaa xulashada xaashidayada.
Sideen uga saareynaa bogga sare ee horey loogu adeegsaday bog?
Dhagsii astaanta bogga, jiid oo ku rid aagga cawlan ee ku hareeraysan. Xariif ah!
Haddii aad rabto inaad sii wadato barashada (iyo qoto dheer) fikradda bogagga sayidka ee InDesign, waxaan kugula talinayaa inaad aragto hagaha caawinta barnaamijka laftiisa (internetka laga arki karo).
Macluumaad dheeraad ah - Talooyin ku saabsan isticmaalka midabka InDesign, 8 Khiyaanooyinka Qarsoon ee Dardar Gelin Doonta Hawshaada
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Tababarada » Casharro aasaasi ah: bogagga sayidka ee InDesign
Maxaa kuu keenaya macluumaad weyn, uguna xiisaha badan, mahadsanid
Ku jawaab Kizi 1
Waad salaaman tahay, waan ka xumahay, laakiin waxaan su'aal qabaa markaan aqrinayo maqaalkaaga. Sidee sayid loogu dabaqi karaa dhammaan bogagga aan caadiga ahayn hal mar si aan macquul ahayn?
Suurtagal ma tahay?
Juan Jordan dijo
Mahadsanid. Ma heli karo waddo aan ku sameysto bog macallin oo kaliya waxyaabaha qaar isbeddelaan, tusaale ahaan: buuga sheekooyinka, halkaas oo sheeko kasta cinwaankeedu ka sarreeyo, laakiin inta kale ay weli tahay.
PS: Is-waafajinta waa h la'aan, haddii kale waxay ula jeedaan ilaahadda Griiga.
Jawaab Juan Juan